गान्धीको अहिंसक अर्थतन्त्रको आलोकमा नेपालका गाउँ
जीविकाको कमजोर आधार, शोषण र विभिन्न विभेदको धक्काले लर्खराएको गाउँको अर्थतन्त्र उकास्न महात्मा गान्धीले परिकल्पना गरेको अहिंसक समाजको सूत्र प्रभावकारी हुन सक्छ।
सीमाञ्चलका सारथि थिए– रघुवंश बाबू जातिवादमा जेलिएको बिहारको राजनीतिमा उच्च जातिका रघुवंशप्रसाद सिंह पिछडावर्गमा समेत कहिल्यै ‘मिसफिट’ थिएनन् । कतिपयको भनाइमा ‘बिहारको राजनीतिमा जनप्रतिनिधि मानक बनाउनु पर्दा उनको जीवनचरित्र नै पर्याप्त हुन्छ ।’
देहातमा अझै चल्छ ‘कम्पनी मुद्रा’
बयलगाडाबाट मोटरसाइकलसम्म पुगेको देहातको कारोबार अझै पनि ढुंगाको टुक्रालाई नापतौलको इकाइ मानिरहेको छ, सीमावर्ती बजारमा ‘कम्पनी मुद्रा’ को प्रचलन हट्न सकेको छैन।
शहरी आवश्यकतालाई देहातको श्रम र परम्परागत सीपसँग समन्वय गर्न सकियो भने जनशक्ति पलायन रोक्न र परम्परागत ज्ञानको संरक्षण गर्न बल पुग्नेछ।
पानी अभावबाट सताइएका महिला
पानीसम्मको पहुँचजस्ता समस्याले देहातका महिलाको समग्र विकासमा कति बाधा पुर्‍याइरहेको छ, त्यो उनीहरूको कथा सुनेपछि मात्र थाहा हुन्छ।
केपी ओलीले बोलेको शब्दलाई जस्तो अर्थ दिएर आन्दोलनरत समुदायसमक्ष पुर्‍याइयो वा उनीहरूले जे बुझे त्यसले आक्रोश र उत्तेजना फैलायो।
चर्को ब्याजको चक्रव्यूह
देहातमा उदाएको नव–सामन्ती वर्गले गरीबलाई ऋणको पासोमा पारेर गाउँको अर्थ–राजनीति आफ्नो कब्जामा लिएको छ।
लोक–जीवनमा रैथाने सीप
समयक्रममा हराउँदै गएका परम्परागत बाजा, वस्तु र सीपलाई धार्मिक अनुष्ठान र पर्वहरूले जीवित राखेका छन्।
नेता बन्ने बाटो
तराईका गाउँमा ‘नेताजी’ भनेर सम्बोधन गरिने व्यक्ति बग्रेल्ती भेटिन्छन्। प्रत्येक वडा वा टोलमा दुई–चार जना यस्ता व्यक्ति भेटिन्छन्, जसलाई तिनका ‘लाभार्थी’ हरूले ‘नेताजी’ सम्बोधन गर्छन्।
मधेशी समुदायको दशहरा र पहाडी समुदायको दशैंले समय क्रममा एक–अर्काको प्रभाव ग्रहण गरेका छन्, जुन इन्द्रेणी समाजको सुन्दर पक्ष बनेको छ।
कुस्ती ब्युँताउने प्रयास
कुस्ती खेल संरक्षण र प्रवर्द्धन थालेको महागढीमाई नगरपालिका ‘खलिफाहरूको नगर’ बन्न सक्छ ।
बहुरी सदाको बह
अरूको घरमा मजदूरी गरेर ऊर्जावान उमेर रित्याए पनि पुस्तौंदेखि ऋणको भार बोक्दै दीन–हीन बाँचिरहेका बहुरी सदाहरूले कहिले पाउलान् आत्मसम्मानको जीवन ?
‘मच्छी बेचके टहकार मुह’
समग्रमा यथास्थिति विरुद्ध थारू जनमतमा जुन हलचल छ, त्यसको निकासप्रति राज्यले आँखा चिम्लिनुहुँदैन ।
खर्के दमाई, महादेवप्रसाद ढकाल र एक पूर्वकमैया युवा यस क्षेत्रका लागि मात्रै होइन, अन्यत्रका लागि समेत उदाहरण हुन् ।
पारिको ‘खुनवा’ सँग जोडिएकाले यो बोर्डर बजार स्थानीय जनजिब्रोमा ‘बाडर’ भनेर परिचित छ ।
कसरी बिर्सनु त्यो अमानुषिक यातना ?
द्वन्द्वपीडितलाई पीडा बिर्सिदेऊ भन्न सजिलो छ । प्रचण्ड बहुमतको वाम सरकारले त अझ ‘क्षमाभाव राख’ भनेर अर्ती दिन थालेको देखिन्छ, तर पीडितहरूलाई त्यस्तो ‘अर्ती–बुद्धि’ आत्मसात् गर्न सहज हुँदैन ।
भवानी भिक्षुको गाउँ
भवानी भिक्षुले ६० वर्षअघि आफ्नो प्रसिद्ध कथा हारजित मा वर्णन गरेको परिवेश नै अनुभूत हुन्छ, आज पनि गोटिहवा गाउँ पुग्दा ।
अहिले पञ्चायतीमा जायज, नजायज वा कानूनी गैरकानूनी जे जस्तो गर्नुपर्दा आफ्नो जाति वा पार्टीको आधार हेर्ने गरेको सुनिन्छ ।
विकासको लागि अपनाइएको पारामा परिवर्तन अत्यावश्यक छ ।
प्रदेश सभा: विविधता सम्बोधनको चुनौती
जनआकांक्षा र भावनासँगै जातीय, सांस्कृतिक, भाषिक लगायतका विविधता सम्बोधन प्रदेश सभाहरूको प्रमुख चुनौती हो।
प्रादेशिक अभ्यासको अर्थ हो– किनारीकृत सामान्यजनले महत्व पाउनु, कुनै पनि प्रकारको भेदभाव नहुनु । त्यसका लागि सत्ता वा प्रतिपक्षमा रहने दलहरूले मात्र नभई प्रदेशको नागरिक समाज र मिडियाले पनि बलियो सरोकार देखाउनुपर्छ ।
मतदाताबाट धर्म रक्षाको अपेक्षा
लोकतन्त्रको प्राणको रूपमा रहेको निर्वाचन प्रदूषित भयो भने देश नै कमजोर हुन्छ । निर्वाचन मूलतः देशलाई माया गर्ने एउटा अवसर हो । हामी जस्तो जनप्रतिनिधि छान्छौं, देश त्यस्तै बन्छ । यस अर्थमा, पार्टी र प्रत्यासीहरू मात्र होइन हामी मतदाता पनि निर्वाचनरूपी परीक्षामा छौं ।